07/04/13 ~ Myanmar Forward
" မိန်းမလျာများအား အမေရိကန်အစိုးရက Green Card ထုတ်ပေး "
Posted by drmyochit Thursday, July 04, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
မိန်းမလျာ များအား ခွဲခြားဆက်ဆံ မှုကို အဆုံးသတ်သည့် အနေဖြင့် လိင်တူ လက်ထပ်သည့် စုံတွဲများသည် Green Card လျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အမေရိ ကန် အစိုးရ ကပြောကြားခဲ့သည်။
မိန်းမလျာများအား Green Card ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတွင်း လုံခြုံရေး ဒါရိုက်တာ ဂျန်းနက်နာ ပိုလီတန်နို က ပြောကြားသည်။
ဖက်ဒရယ် ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး များကို ချဲ့ထွင်ရန် နိုင်ငံအတွင်း လက်ထပ်ခဲ့သူ မိန်းမလျာများ အကျိုး ရှိစေရန် အတွက် တရားရုံးချုပ်မှ ၄င်းကတ်ထုတ် ပေးရန် လွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရားရုံးမှ ယင်းကဲ့သို့ အမိန့်ချ မှတ်ခဲ့ပြီးနောက် အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် သမ္မတ အိုဘားမားက ဖက်ဒရယ်အေဂျင် စီကို ညွှန် ကြားခဲ့သည်။
မိန်းမလျာများအား Green Card ထုတ်ပေးရန် တောင်းခံထားသည့် အသနားခံ စာများကို ပြန်စစ်ဆေးရန် အမေရိကန် နိုင်ငံသားနှင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဌာန ကို ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း ဂျန်းနက် က ပြောကြားသည်။
တရားရုံးချုပ်မှ ယင်းကဲ့သို့ အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက် အသနားခံစာ တင် ထားသည့် မိန်းမလျာ စုံတွဲသည် Green Card ကို ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Green Card ကိုင်ဆောင်ထားသူ အနေဖြင့် အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင့်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံအတွင်း၌ ဗီဇာမလိုဘဲ ဝင်ထွက်သွား လာခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဦးအနေနဲ့ပြောရရင် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက် သဘောတူပါတယ်
Posted by drmyochit Thursday, July 04, 2013, under အမေးအဖြေ | No comments
"မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများအပြီးတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာကျော် TIME မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံး၌ ဆရာတော် ဦးဝီရသူအား “အကြမ်းဖတ် စစ်သွေးကြွ ဘုန်ကြီး” ဟု စွပ်စွဲရေးသားချက်ကို လက်မခံနိုင်ကြောင်းနှင့် ဆရာတော်ဘတ်မှ ထောင်ခံကြောင်း ပြောကြားလာသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒိုင်းမွန်းဦးရွှေကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်သမျှတို့ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။"
မေး=အခုပြဋ္ဌာန်းလာမယ့် အမျိုးစောင့်ဥပဒေအပေါ် ဦးအနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်မိသလဲ။
ဖြေ= အမျိုးစောင့်ဥပဒေကိုတော့ ဦးအနေနဲ့ လေ့လာနေတုန်းပါပဲ ဒါပေမယ့် အဲဒီအမျိုးစောင့်ဥပဒေဟာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ပဲလား၊ အခြားဘာသာဝင်တွေ အတွက်ရော မပါဘူးလားလို့ ကေသာရာမကျောင်းတိုက်က ဆရာတော်ဦးကေသရကို ဦး မေးကြည့်တော့ တစ်ခြားဘာသာတွေမှာက ရှိပြီးသားတဲ့။ ဦးပဉ္ဇင်းတို့ဘာသာမှာက မရှိသေးဘူး အဲဒီအတွက် ဒကာကြီးတို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဘတ်က စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးတဲ့ ပြီးတော့ ဦးအနေနဲ့ပြောရရင် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက် သဘောတူပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တစ်ချို့က ချစ်လို့ကြိုက်လို့လက်ထပ်ပြီးရင် နိကာဖ် ဖတ်ပြီး အတင်းဆွဲသွင်းကြတာတွေရှိတော့ တရားမျှတတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
မေး= အခုဆိုရင် ဘာသာကူးပြီး အိမ်ထောင်ပြုကြတာတွေရှိနေတယ်လေ အဆင်ပြေကြသူတွေရှိသလို အဆင်မပြေသူတွေလည်း ရှိနေတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အခုအမျိုးစောင့်ဥပဒေကို (မူကြမ်း) မှာပါတဲ့ ဥပဒေကို မနာခံတဲ့အတွက် ကျခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ် သတ်မှတ်ချက်အပေါ် ဦးအမြင်ကရော။
ဖြေ= အဲ့ဒါကိုတော့လက်ခံဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး။ ဒါက ရာဇ၀တ်မှုမဟုတ်ရင်တော့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖို့ဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကကော လိုက်နာနိုင်ပါ့မလား။ ပြည်ပက လူအမျိုးမျိုး၊ ဘာသာအမျိုးမျိုးနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုသူတွေလဲ ရှိနေတယ်လေ။ ဒါကိုလဲ စဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး ဒါကို မြန်မာမျိုးထု တစ်ရပ်လုံးက လက်ခံနိုင်ပါ့မလားပေါ့။
မေး= အခုလိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာဟာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်းပါ အပိုဒ် (၁၆)၊ အပိုဒ် (၂) တို့နဲ့ မကိုက်ညီဘူးလို့ ဝေဖန်နေကြတာတွေကိုတော့ ဦးဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲ။
ဖြေ= လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဦးလဲခုအချိန်ထိ မခံစားရသေးပါဘူး။ လူတိုင်းရော လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို အပြည့်အ၀ခံစားရပြီလို့ ဦးမကြားမိသေးပါဘူး။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ရက်ရက်စက်စက် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရတုန်းပါ။ အာဖဂန်ကိုကြည့်မလား အိန္ဒိယကိုကြည့်မလား အနီးစပ်ဆုံး ထိုင်းမှာ ဦးကို ငါးဖမ်းလှေဆီ ရက်ရက်စက်စက် အရောင်းခံခဲ့ရတဲ့အချိန်က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံခဲ့ရတာဘဲ။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာလည်း ၁၉၈၀ ခုနှစ်ကစလို့ ၁၉၈၂ အလည်လောက်ထိ ညောင်ပင်ကွင်း ဘလော့လိပ် စစ်မြေပြင်ကိုရောက်နေတုန်းကလည်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာကို ဦးကိုယ်တိုင် ခံခဲ့ရ၊ ကြုံခဲ့ရသေးတာပဲ။ ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတိုင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘယ်မှာမှ အပြည့်အ၀မခံစားရသေးပါဘူး။ ပြီးတော့ ဝေဖန်နေကြသူတွေ အရမ်းချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့ အရမ်းပညာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေဟာ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက်၊ အရေးတကြီးစိုးရိမ်တာမျိုး မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒီလူတွေအားလုံးဟာ ဘာသာပေါင်းစုံ လည်ပင်းဖက်ပေါင်းနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ဥပဒေဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တယ်လို့ ထင်ရင် မှားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ကာလ၊ ဒေသ၊ ပယောဂနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာနေတတ်ရင် ဦးဝီရသူဆိုတာလည်း ပေါ်ပေါက်မလာသလို ဥပဒေဆိုတာကိုလည်း ဆရာတော်က ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
မေး= ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အကြမ်းဖက်ဘာသာပါလို့ ဖော်ပြထားတဲ့ TIME မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဆောင်းပါးကိုရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ= ဦးဟာ အခုလက်ရှိမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ပါ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြားမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့တာပါ။ အဲဒီကတည်းက ခုအချိန်ထိ ဦးကို ဘယ်မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာကမှ အကြမ်းဖက်ရက်စက်တာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အကြမ်းဖက်ဘာသာလို့ စွပ်စွဲတာကို ဦးကတော့ ဆန့်ကျင် ကန့်ကွပ်ပါတယ်။
မေး= ဆရာတော်ဦးဝီရသူကရော သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ တကယ်ပဲ အကြမ်းဖက်ဝါဒပုံပေါက်နေသလား။တစ်ခြားဘသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲ။
ဖြေ= ဆရာတော်ဝီရသူရဲ့ အမျိုးသားရေး ပေါ့ပေါ့မတွေးနဲ့ဆိုတဲ့ အခွေထွက်လာပါတယ်။ အရမ်းလဲဟောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ဦးဝီရသူရဲ့ မူစလင်ဘာသာဝင်တွေအပေါ် မြင်တဲ့အမြင်နဲ့ တချို့ဟောပြောချက်တွေက ပုဂ္ဂလိကဆန်ပြီး ပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့် တွေ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပီနန်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ကျောင်းမှာ ဦးပဉ္ဇင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ပြီး မြန်မာအစ္စလာမ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖြေးရှင်းလျှောက်ထားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ဆရာတော်ရဲ့ သဘောထားတွေကို သိသင့်သလောက် သိလာရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မူစလင်များစွာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးတာ၊ အထူးသဖြင့် မန္တလေးက မန္တလေးသား အစ္စလာမ်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတာ၊ အစ္စလာမ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးတာတွေကြားရလို့ ဆရာတော်ဟာ အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မဟုတ်ဘဲ အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာ တည်တံ့ပြီး တိုင်းပြည်ကောင်းကြိုးအတွက် ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးကိုသာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဆရာတော်တပါးလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
မေး=နောက်ဆုံး TIME မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဖော်ပြချက်ကို ရှုတ်ချပြီး ဆရာတော် ဦးဝီရသူကို ထောက်ခံတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ဖြေ= ပြောချင်တာကတော့ ဆရာတော်ဦးဝီရသူဟာ အစွန်းရောက်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံက ဘာသာရေးအငြင်းပွားမှုဟာ အီရန်က ဆွန်နီနဲ့ ရှီးဟတ် တို့ ထသတ်နေကြတာလောက် မဆိုးပါဘူး။ သူတို့ဆိုရင် အလ္လာမ်နဲ့တမန်တော်ကို အလွန်တရာယုံကြည်ကြသူတွေလေ။ နောက်ဆရာတော်က ရှေ့လျှောက်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပဲ ဖော်ဆောင်ဖို့ ကတိပေးထားတာမို့ ထောက်ခံတာပါ။
(1.7.2013)နေ့ထုတ် The express times သတင်းဂျာနယ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
NLD ပါတီ အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်များ ဖက်မှ ရပ်တည် ထောက်ခံမှု မရှိသည့် အတွက် ပါတီဝင်များ နှုတ်ထွက်ရန် ပြင်ဆင်နေ
Posted by drmyochit Thursday, July 04, 2013, under ပေးစာ | No comments
NLD ပါတီ(ဗဟို) ဥက္ကဌ ဒေါ်စုကြည်နှင့် NLD ပါတီ (ဗဟို) အနေဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သော မွတ်ဆလင်-မြန်မာ ပဋိပက္ခများနှင့် မျိုးစောင့်ဥပဒေ ပြဌာန်းရေးဆွဲရေး ဆောင်ရွက် ရာတွင် ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ၀င်များ ဖက်မှ ရပ်တည်ထောက်ခံမှု မပြုခဲ့သည့် လုပ်ရပ် များကြောင့် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရဟန်း သံဃာတော် များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး အတွက် ကြိုးပမ်း နေသော ဒေသခံ ရပ်မိ ရပ်ဖများ၏ ဥပေက္ခာ ပြုခြင်း /မုန်းတီးသည့် အပြုအမူတို့ကို မြင်တွေ့ ရသဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့ တွင် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီမြို့နယ် “ပ၀ကျေးရွာ” အုပ်စု NLD ပါတီ အလုပ် အမှုဆောင် ဥက္ကဌ ဦးထွန်းလှ၏ နေအိမ်၌ ဦးထွန်းလှနှင့် ပါတီဝင် (၂၀)ဦးခန့်သည် အစည်း အဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး NLD ပါတီမှ နှုတ်ထွက်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေ ကြောင်း သတင်း ရရှိ ပါသည်။
KIA အဖွဲ့ ဖမ်းဆီးသွားသော ဒေသခံရွာသားတစ်ဦးအား ငွေ ၁ သိန်းပေး၍ ပြန်လည်လွတ်ပေး
ဇူလိုင်လ ၄ ရက် ၂၀၁၃
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ၀ူယန်ကျေး ရွာသင်္ချိုင်းအနီး ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား ခဲ့သော ရွာသာ(၂)ဦးအနက် ၁ ဦးအား ဇူ ၂ ရက်နေ့က ငွေ ၁ သိန်းပေးသဖြင့် KIA အဖွဲ့မှ ပြန်လည် လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရသည်။
“ဖမ်းသွားတုန်းက ၃ ယောက်ပါ၊ ၁ ယောက်က အဲဒီအချိန်တုန်းကတည်းက ထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့အတွက် ၂ ယောက်အဖမ်းခံ ရတာပါ။ အခုလွတ်လာတဲ့ ကောင်လေးကို သူ့ဆွေမျိုးတွေက ငွေ ၁ သိန်းစုပြီး သွားရွေးခဲ့ရတာ။ ကောင်လေးက ခြေထောက်တစ်ဖက်မသန်တော့ KIA အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လက်မခံချင် တာလည်း နေမှာပေါ့။ နန်ဇော်ယန်ကျေးရွာနဲ့ ၄ မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ တောင်ကုန်းမှာရှိတဲ့ KIA စခန်းကို သွားပြီးရွေးရတာ၊ ကျန်တဲ့ရွာသားတစ်ဦးကတော့ အဲဒီစခန်းမှာ စစ်သင်တန်း တက်နေတယ်”ဟု ၀ူယန် ရွာသားတစ်ဦးကက ပြောပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ နန်ဇော်ယန်ကျေးရွာအနီးရှိ KIA စခန်းသည် တပ်မဟာ(၅) လက်အောက်ခံ၊ တပ်ရင်း(၃)မှ အခြေပြုလျက်ရှိပြီး ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသော ဒေသခံရွာသားလူငယ်(၂၀)ဦးခန့်အား စစ်သင်တန်း ပို့လျက်ရှိကြောင်း၊ စစ်သင်တန်း မတက်နိုင်သော ရွာသားများအား တစ်ဦးလျှင်ငွေ ၁ သိန်းပေး၍ လာရောက်ခေါ်ယူရန် အကြောင်းကြားထားကြောင်းနှင့် ငွေ မပေးနိုင်သော ရွာသားအချို့မှာ KIA စခန်း၌ ထင်းခွေ၊ ရေခပ်၊ ထမင်းချက်အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်နေရကြောင်း၊ ၎င်းရွာ များတွင် နေထိုင်ကြသော လူငယ်များမှာ အခြားမြို့၊ ရွာများသို့ တိမ်းရှောင်ကာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရကြောင်း ဒေသခံ များ ၏ ပြောပြချက်အရ သိရှိရသည်။
ကျောက်တော်မြို့နယ်တွင် ရခိုင်မိန်းကလေးနှစ်ဦး ကုလားတိုက်ခိုက်ခံရ၊ ဆေးရုံရောက်
Posted by drmyochit Thursday, July 04, 2013, under သတင်းများ | No comments
၀၄ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၃
ကျောက်တော်မြို့နယ် ပီချောင်းဝရှိ မြင်းဂန်းကျေးရွာမှ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကို ရွာကမ်းစမ်တွင် ပိုက်လာချသူ ကုလားများက ရိုက်နှုက်တိုက်ခိုက် လုယက်ခဲ့ကြသောကြောင့် ကျောက်တော်မြို့ ဆေးရုံသို့ ရောက်နေကြရာ အနက်တစ်ဦးမှာ သတိမရသေးပေ။
ကျူရှင်ပြသည့်ဆရာမငယ် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဆန်းဆန်း (၂၀-နှစ်) နှင့် ၄င်း၏ တပည့်မ သန်းနွယ် (၁၂) နှစ်တို့သည် ယမန်နေ့ ညရှစ်နာရီခန့်တွင် စာပြအပြီး နောက်ဖေးနောက်ဖီသွားရန် ရွာ၏ မြစ်ကမ်းစပ်သို့ တင်လာခဲ့ကြသည်။
၄င်းတို့နှစ်ယောက်အား မြစ်ကမ်းတွင် ပိုက်ချနေသူ ကုလားနှစ်ဦးက ဖမ်းချုပ်ပြီး တုတ်များဖြင့်ရိုက်နှုက်ခြင်း၊ ရေထဲသို့ ခေါင်းနှစ်၍ သတ်ရန်ကြိုးစားခြင်း၊ နားရွက်များမှ နားတောင်းများကို ဆွဲဖြတ်ယူခြင်းတို့ပြုခဲ့ကြသည်။
မိန်းကလေးနှစ်ဦးက အော်ဟစ်ခဲ့ကြသော်လည်း ရွာထဲတွင် ဗွီဒီယိုပြသည့် အသံဖြင့် ဆူညံနေခြင်း၊ ကြားလိုက်သူများကလည်း ကမ်းတစ်ဖက် ကုလားရွာမှ အော်သံဟုသာ အမှတ်မှားကြခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ရွာသားများက မကယ်တင်နိုင်လိုက်ခဲ့ကြပေ။
တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရသော မိန်းကလေးနှစ်ဦးအား စက်လှေဖြင့် ဆေးရုံသို့လိုက်ပို့ရာ ယနေ့ မနက် အာရုံမတက်မီ (၂) နာရီမှ ကျောက်တော်ဆေးရုံသို့ရောက်ရှိကြသည်။
ဆန်းဆန်း (၂၀-နှစ်)မှာ ယခုအချိန် (မနက် ၆:၂၀) အထိ သတိမရသေးချေ။ သန်းနွယ် (၁၂-နှစ်)၏ မျက်စိများမှာ ဖူးယောင်နေပြီး၊ နားတောင်ဆွဲဖြုတ်ခံရသောကြောင့် နားရွက်များပဲ့နေသည်။
မုဒိမ်းပြုကျင့်ခြင်းခံရမှုရှိမရှိကို ဆေးရုံလာပို့သော မိသားစုဝင်များက ပြောကြားခြင်းမရှိပေ။
မြင်းဂန်းရွာနှင့် တစ်ဖက်တစ်ကမ်းတွင် ပီစိ (ကုလား)ရွာ နှင့် နိတင် (ကုလား)ရွာ တို့ရှိကြသည်။
Credit: Shwemyanmar media group
ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကို ဓမ္မတာမဟုတ်သည့်(စအိုပေါက်) နည်းဖြင့် အဓမ္မပြုကျင့်ခံရ
Posted by drmyochit Thursday, July 04, 2013, under မှုခင်း | No comments
သိပ်မကြာသေးမီ အချိန်က တောရွာကလေးတစ်ရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ အိမ်တစ်အိမ်သည် အိမ်တက်မင်္ဂလာ အဖြစ်ရွာဦးကျောင်းမှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်လေးအား ဆွမ်းကျွေးပင့်ပြီး တရားပွဲ ပြုလုပ်ပါသည်။
၄င်းအိမ်ကလေးသည် ယနေ့ခေတ်တွင် လူ့အခွင့်ရေး အထူးလေးစားသော ပါတီမှ
ကျေးလက်ပါတီဌာနရုံးလေးနှင့် ကပ်လျှက် တည်ရှိပါသည်။ ၄င်းအိမ်တက် တရားပွဲသို့ ဘေးချင်းကပ်ရက် ပါတီဌာနရုံးမှ ပါတီဝင်များနှင့် ကျေးလက်ပါတီ ဦးဆောင်အမျိုးသမီးကြီးလည်း တရားနာလာရောက်ပါသည်။
ဆွမ်းဘုဉ်းပေးပြီးသောအခါ ဆရာတော်လေးသည် တရားပလ္လင်ပေါ်သို့ တက်ရောက်ကာ တရားဟောရန် ပြင်ပါတော့သည်။ တရားပွဲမစမီ အရင် ဆုံးငါးပါး သီလ ပေးပါသည်။
သူတစ်ပါး အသက်အား သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏ အရှင်ဘုရား.
စသဖြင့် အစဆုံး ရွတ်ဆိုစဉ်မှာပင် လူ့အခွင့်ရေး အလေးထားသူ အမျိုးသမီးကြီးမှ မတ်တပ်ထရပ် လိုက်ပါလေတော့သည်။ အားလုံးလဲ ဘာရယ်မသိ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်သွားသည်။
အကြည့်အားလုံးက ထိုအမျိုးသမီး ကြီးထံ သို့ စုပြုံ ရောက်ရှိသွားစဉ်မှာပင် "ဘုန်းဘုန်း ဘုရား ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ငါးပါးသီလ ထဲက တစ်ချို့ထဲသော အချက်လက်တွေကို တပည့်တော်မ ကန့်ကွက် ပါတယ်ဘုရား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်ရေးနဲ့ မကိုက်ညီလို့ပါ။"ဟု ပြောလိုက်လေ သည်။
လူအုပ်ကြီးမှ သက်ပြင်းချသံများ ထွက်ပေါ်လာပြီး ဘုန်းဘုန်းလဲ မျက်လုံးပြူးသွားရရှာသည်။ "ဟမ် . . . ဘာလို့လဲ ဒကာမကြီးရဲ့ ဘယ်အချက်လက်တွေကများ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်ရေးနဲ့ မကိုက်ညီပါသလဲ။"
ဒီလိုပါ ဘုရား သေရည်သေရက် သောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခိုင်းတယ် ဆိုရာမှာ နိုင်ငံတကာမှာက အရက်ဘီယာ အစရှိသည်တို့ကို အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ရင် တရားဝင် သောက်သုံးခွင့်ပေးထားပါတယ်။
ဒီထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သူတွေထဲမှာ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးသားတွေ အများကြီးပါပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီလူတွေကို သေရည်သေရက် ရှောင်ကြဉ်ရမယ်လို့ ဘုန်းဘုန်း တားမြစ်နေတာက နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်ရေး နဲ့ မညီပါဘူး ဘုရား။ သူတို့ သောက်သုံးချင်ရင် သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းမတားသင့်ပါဘူး။
နောက်ပြီးတော့ ကာမေသု မိစ္ဆာ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ဘုန်းဘုန်းဆိုလိုတာက ကိုယ့်ဇနီးမယား မဟုတ်တဲ့သူတွေနဲ့ လိင်မဆက်ဆံရ သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အချို့ သော အမတ်မင်းများဟာ ဆိုရင်ဖြင့် ကိုယ့်ဇနီး မယားမဟုတ်တောင်မှ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လိင်ဆက်ဆံလို့ရအောင် ပြည့်တန်ဆာ ဥပေဒေတွေတောင်မှ လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းနေပါတယ် ဘုရား။ နောက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာမှာ တရားဝင် မယူဘဲနဲ့ living together အဖြစ်နဲ့ ကလေးတွေရသည်ထိ လိင်ဆက်ဆံ နေခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဇနီး မယား မဟုတ်ဘဲနဲ့ တခြားသူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခိုင်းတာဟာ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်ရေး နဲ့ မညီဘူးပါဘူး ဘုရား . . .
ထို အမျိုးသမီးကြီးကား အထက်ပါ ကဲ့သို့ ချက်နှင့် လက်နှင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြောပြပြီး ပြန်ထိုင်သွားလေတော့သည်။
ဆရာတော်လေးသည်ကား ငါးပါးသီလကို ဆက်ပေးရကောင်းနိုးနိုး၊ တရားပွဲကို ဆက်ဟောရ ကောင်းနိုးနိုးနှင့် တခွန်းသော စကားကို ရေရွတ်လိုက်ပါတော့သည်။
မုံရွာမြို့ပေါ်တွင် တရားမ၀င်အနှိပ်ခန်းများကြောင့် လူမှုရေးဦးတည်ချက်များ ပျက်ပြားစေနိုင်
Posted by drmyochit Thursday, July 04, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
မုံရွာ ၊ဇူလိုင် ၄
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အထူး စည်ကား လျက်ရှိသော မုံရွာမြို့ကြီးသည် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးလာ သည်နှင့် အမျှ တရား မ၀င်အနှိပ်ခန်းများတည်ထောင်လုပ်ကိုင်သူ များပြား လာလျက်ရှိရာ လူမှုရေး ဦးတည်ချက် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပျက်ပြားစေနိုင်ကြောင်း မုံရွာမြို့ခံ မြို့မိ၊မြို့ဖတစ်ဦးမှ ပြောပြ သည်။
“ တရားမ၀င် အမျိုးသမီးအနှိပ်ခန်းဆိုတာ ဘာသာတရားရဲ့ အယူဝါဒနဲ့လည်း လျော်ကန်မှုမရှိသလို လူတွေ ရဲ့ကိုယ်ကျင့် တရား ကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်..” ဟု ၎င်း မြို့ခံက ဆက်လက် ၍ ပြောသည်။
မုံရွာမြို့တွင်းရှိ အိုးဘိုတောင်မြို့သစ်၊ ရတနာပုံ၊ သလ္လာ၊ ထန်းတော၊ စက်မှုဇုန် စသည့်ရပ်ကွက်ကြီးများတွင် ရောင်းစုံမီးလုံး၊ မီးပန်းများထွန်းညှိ၍ အချိုရည်မျိုးစုံမှအစ ဘီယာ၊ အရက်မျိုးစုံရောင်းချခြင်းနှင့်အတူ ကာရာအိုကေ (KTV) ဆိုင်ခန်းကြီးများ ဖွင့်လှစ်ထားရာ အချို့သော လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များသည် တရားမ၀င် အမျိုးသမီးအနှိပ်ခန်း လုပ်ငန်းများပါ ပူးတွဲဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
အမိ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးသည် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ ဦးတည်ချက်(၁၂)ရပ်အား ရေးဆွဲချမှတ်၍ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်း ဦးတည်ချက်(၁၂)ရပ်ရှိ လူမှုရေး ဦးတည်ချက်(၄)ရပ်တွင် တစ်မျိုးသား လုံး၏ အကျင့်စာရိတ္တမြှင့် မားရေး၊ အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်မြှင့်မားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ အမျိုး သားရေး လက္ခဏာများ မပျောက် ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တရားမ၀င် အမျိုးသမီး အနှိပ်ခန်းများ ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေခြင်သည် နိုင်ငံတော် ၏ လူမှုရေး ဦးတည်ချက် လုပ်ငန် စဉ်များအား ထိ ခိုက်နစ်နာစေနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာစမ်းစစ်သူများက ဝေဖန်ပြောဆိုလျက်ရှိကြောင်း သိရ သည်။
“ တရားမ၀င် အမျိုးသမီးအနှိပ်ခန်းတွေက လူငယ်တွေအတွက် ပြဿနာဖြစ်တည်ရာ ရပ်ဝန်းတစ်ခုဖြစ် နေပါတယ်..။ အချို့ဆိုင်တွေဆိုရင် မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ 88 ဆေးဝါးဆိုတာတောင် ၀ယ်ယူ လို့ရနိုင်ပါတယ်..” ဟု အမျိုးသားရေး စရိုက်လက္ခဏာများအား မပျောက်ပျက်အောင် လေ့လာစမ်းစစ်နေသူ သမိုင်း ပညာရှင် ပါမောက္ခတစ်ဦးမှ ဆိုသည်။
တက်သစ်စ အမျိုးသမီးငယ်လေးများအား အအေးခန်းအတွင်းထားရှိပြီး တရားမ၀င်းအနှိပ်ခန်းလုပ်ငန်း များ လုပ်ကိုင်နေခြင်းသည် အမျိုးသမီးလေးများ၏ ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းများဖြစ် သည့်အတွက် လူကုန်ကူးမှုဘေးအန္တရာယ်များကိုလည်း လက်ရပ်ခေါ်နေသော လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
“ တရားမ၀င် အမျိုးသမီး အနှိပ်ခန်းတွေကို ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ဖို့ဆိုရင် ဌာနဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းအဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းထားရှိရပါ့မယ်။ တရားဝင် လုပ်ကိုင်ခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စဉ် ချပေးထားတဲ့ ကာရာအိုကေ (KTV) ဆိုင်ခန်းကြီး များဟာ သက်ဆိုင်ရာက သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ပေးထာတဲ့ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိ မရှိဆိုတာ ဆယ်အိမ် စု အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်အရ အခြေခံအကျဆုံး သတင်းအချက်အလက်များ စုံစမ်းရ ရှိနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများက မဖြစ်မနေ အဲ့ဒီပူးပေါင်းအဖွဲ့မှာ ပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
စားသောက်ဖွယ်ရာများ ရောင်းချနေခြင်းနှင့်ပတ်သက်လို့ စီစစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ နဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်များအပေါ် အမှန်တကယ်လိုက်နာမှုရှိ၊ မရှိဆိုတာ စီစစ်နိုင်ဖို့လည်း မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး ဌာနက ပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပြန်ပါတယ်။ ကာရာအိုကေ (KTV) ဆိုင်ခန်းကြီးများကို လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးမည်ဆိုပါက အခန်းဖွဲ့ စည်းပုံ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား စတဲ့အခြေအနေတွေဟာ လိုင်စင်ချမှတ်ပေးဖို့ သင့်မသင့်ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ဗီဒီယိုကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့က ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှာ ပါဝင်နေရပါ့မယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲနေမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း စီစစ်နိုင်ဖို့ မြို့နယ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး ဌာနက ပါရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းလိုင် စင်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ တိုင်းဒေသကြီးအတွက် အမှန်တကယ် အခွန်ပေးဆောင်ထားခြင်းရှိ မရှိဆိုတာ စီစစ် ဖို့လိုအပ်တာကြောင့် ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနလည်း အဲ့ဒီပူးပေါင်းအဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပူး ပေါင်းအဖွဲ့ကနေ သတင်းအရ အရှောင်တခင်ဝင်စစ်လို့ ဥပဒေနဲ့မလျော်ညီတာတွေကို တရားစွဲဖို့အတွက်လည်း ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်” ဟု မုံရွာမြို့ခံ ဥပဒေပညာရှင် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကြီးတစ်ဦးမှ မှတ်ချက်ပြု ပြောပြသည်။
အဆိုပါ တရားမ၀င် အမျိုးသမီး အနှိပ်ခန်းများ လုပ်ကိုင်နေခြင်းသည် တစ်မျိုးသားလုံး၏ အကျင့်စာရိတ္တနှင့် အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များနှင့် အမျိုးသားရေး စရိုက်လက္ခဏာများ ပုံရိပ်ကိုပါ ထိခိုက်စေ နိုင်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး၏ အခွန်ဘဏ္ဍာများကိုလည်း ဆုံးရှုံးနစ်နာစေသည့်အတွက် ကာရာအိုကေ ဆိုင်ခန်းများ စနစ်တကျရှိရေးနှင့် တရားမ၀င်အနှိပ်ခန်းများ ပပျောက်ရေးတို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြရန် လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း မုံရွာမြို့ခံ မြို့မိ၊မြို့ဖ တစ်ဦး၏ ပြောပြချက်များအရ သိရှိရသည်။
ရခိုင်ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေး ကူညီပေးသွားမယ်လို့ နယူးဇီလန် ကတိပြု
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာ ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့က အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ နယူးဇီလန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Murray McCully တွေ့ဆုံစဉ် photo: RFA/ Min Thein Aung
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ အုပ်စုနှစ်ခုအကြားဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်ပုံဘယ်နည်း နဲ့ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သင့်တယ်ဆိုတာကို နယူးဇီလန်နိုင်ငံအနေနဲ့ အလေးအနက်ထား စဉ်းစားသွားမယ့်အပြင် လိုအပ်တာတွေ လည်း မြန်မာအစိုးရကို ကူညီပေးသွားမယ်လို့ နယူးဇီလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Murray McCully က ဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
နယူးဇီလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာ ဒီနေ့ရခိုင်ပြည် နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့ တာပါ။
"ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေအတွက် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် သင့်တာတွေကို နယူးဇီလန်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့ နယူးဇီလန် ပြည်သူတွေက အလေးအနက်ထား စဉ်းစားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပြီး မြန်မာအစိုးရကိုလည်း လိုအပ်တာတွေ ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်" လို့ ပြောသွားတာပါ။
ဒါ့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ အခက်အခဲတွေကို စာနာနားလည်မိသလို သူ့ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်ဟာ အခြေအနေတွေကို လေ့လာရေးသက်သက် လာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
Mr. McCully ဟာ ရေတိုရေရှည်မှာ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း စစ်တွေမြို့မိမြို့ဘတွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ စစ်တွေဟိုတယ်မှာ သီးသန့်တံခါးပိတ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ စက်ရုံစု၊ ခေါင်းဒုတ်ကာ၊ ဒါးပိုင်၊ မှန်ဇီစတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်/ဒါရိုက်တာ မင်းအုပ်စိုးအား ဗဟန်းမြို့နယ် တရားရုံးမှ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်တွင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ သည်။